I-LG G8 ipasisa uvavanyo lweJerryRigEverything | I-Androidsis
Uvavanyo lonyamezelo lweJerryRigEverything yeyona nto yaziwayo namhlanje. Iifowuni ezininzi zihamba ngokufanayo, ngoku kukujika kwe-LG G8. Ifowuni yohlobo lweKorea thaca kwi-MWC 2019. Kwiimarike ezininzi silindile de le modeli imiselwe ngokusesikweni. Kuba okwangoku ukufumaneka kwayo kulinganiselwe, inokuthengwa kuphela eMelika.
Isiphelo esiphakamileyo sophawu Ufumana iimvavanyo eziqhelekileyo malunga noku. Ke ngoko, iscreen sale LG G8 siyakrwempa, emva koko amacala kunye neenzwa, iscreen siyatsha kwaye okokugqibela ifowuni izanywa ukugoba. Ngaba ifowuni yomnxeba iya kuluphumelela olu vavanyo lufuna ubunzima?
Njengokuba kunjalo kwezinye iifowuni eziphezulu, Isikrini se-LG G8 sinokukhuselwa okuhle kwiscreen sayo, Ukwenza iglasi yeGorilla. Ke ngoko, siyabona ukuba isikrini siyamelana kakuhle xa sikrwitshiwe. Kwakhona iikhamera zefowuni zikhuselwe ngolu hlobo lweglasi. Ke akukho nto yenzekayo xa bekrwelwe.
Okulandelayo kuza ithuba lokutshisa isikrini somnxeba. Ukuba sisikrini se-OLED, siyabona ukuba kuthatha malunga nemizuzwana engama-20 ukuba iphume uphawu kuyo. Uphawu olugcinwayo kwiscreen, ngokuchanekileyo kuba yipaneli ye-OLED esetyenziswa kwifowuni.
Emva koko kuza umzuzu wokubaluleka kolu vavanyo lweJerryRigEverything. I-LG G8 iya kubizwa ngokuba lolona vavanyo lokugqibela. Ngale ndlela, sinokubona ukuba isiphelo esiphezulu sophawu lwaseKorea sichasene ngokugqibeleleyo. Ayigobi, kwaye ayenzi ngathi yenza ukophuka. Imelana ngokugqibeleleyo nale nxalenye yovavanyo.
Ke ngoko unako gqiba kwelokuba le LG G8 yifowuni erhabaxa, Oludlulise uvavanyo lweJerryRigEverything oludumileyo nolufuna ngenkulu imibala. Iindaba ezimnandi zorhwebo lwaseKorea kunye nabo babasebenzisi banomdla wokuthenga esi sixhobo sophawu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » I-LG G8 ifumana olona vavanyo ludumileyo lokunyamezela
Ezonaapps zilungileyo ze-Android zokulandela imarike yemasheya